Ahoana no ahitan'ny mpandahateny miteny amin'ny fiteniny?
Ahoana no ahitan’ny mpandahateny miteny amin’ny fiteniny?
Ity fanontaniana ity dia mahaliana amin’ny sain’ny olona tsirairay izay mianatra fiteny vahiny.
Taorian’ny fampivoarana ny dikan-teny voalohany amin’ny fampiharana LingoCard amin’ny finday dia ny fametrahana azy ho an’ny besinimaro sy ny fahafahana miditra, ny app dia nahazo mpampiasa an’arivony.
Ahoana kosa ny amin’ny fitenin’ny fiteny? Nieritreritra izahay – nahoana izahay no tsy mampiray ireo olona rehetra ireo hifampiresaka amin’ny tenin-dreniny ary mifanampy.
Vokatr’izany, nanan-kevitra izahay hamorona sehatra iraisam-pampianarana iraisam-pirenena izay hamaha ny olan’ny fampiharana ireo izay mandalina fiteny vahiny amin’ny fanampiana azy ireo hahita mpampianatra sahaza.
Angamba ny teny malaza indrindra amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena dia Anglisy. Araka ny antontan’isa, maherin’ny 80% amin’ny isan’ny mpianatra amin’ny fiteny vahiny (1,5 lavitrisa eo ho eo) ny fianarana amin’ny teny Anglisy ary saika ny rehetra dia mila fanao amin’ny fiteny.
Aiza no ahitantsika olona miteny anglisy maro?
Inona no tokony hifandraisan’ny mpitenin’ny natiora amintsika?
Voalohany, ny fahafahana hahazo vola an-tserasera. Olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao no vonona ny hanangon-karena amin’ny aterineto amin’ny alàlan’ny fifampiresahana amin’ny fiteniny.
Faharoa koa, maro ireo miteny Anglisy maro no mandalina fiteny vahiny ary mila fanao amin’ny fiteny vahiny izy ireo. Maro amin’izy ireo no te hianatra ilay fiteny lazainao. Noho izany, afaka mifampianatra ianareo amin’ny alalan’ny fanaovana asa toy ny fandaniana 30 minitra mifandray amin’ny tenin-dreninareo ho takalay mandritra ny 30 minitra fifandraisana amin’ny fiteny ianaranao.
Fahatelo, olona marobe manerana izao tontolo izao dia mila fanabeazana an-tserasera ary mitady mpampianatra amin’ny sehatra hafa. Ohatra – amin’ny matematika, mozika, fisakafoana ny lovam-pirenena, ny siansa marina, ny kaonty, ny fandaharana, ny endrika, sns. Samy manana ny fahaiza-manaony sy ny talentany manokana ny tsirairay. Ahoana raha tokony hampianatra olona iray ilay fiteny nianarany izy ireo, nefa nampianarina zavatra iray tamin’izany fotoana izany? Ohatra: nipetraka tany Amerika kely i Jessica ary mila mpampianatra matematika, saingy tsy manam-bola izy ary sarotra ho azy ny mahita ny mpampianatra marina. Soa ihany, ho an’i Jessica, fantatrao tsara ny matematika ary tena ilainao ny mahita mpandahateny anglisy, fa miaina any Rosia ianao. Ny seha-pifaneraserantsika dia hampahafantatra anareo tsirairay ary hahafahanareo mianatra maimaimpoana rehefa mizara ny fahalalanareo, na dia miaina amin’ny lafiny mifanohitra amin’ny tany aza.
Ankoatra izany, amin’ny fampiasana ny fandaharam-potoana mandritra ny resadresaka na horonantsary videokonferansa dia afaka manangana haingana karatra amin’ny teny vaovao sy fehezanteny vaovao izay handehandeha avy hatrany any amin’ny toeram-pamokarananao rahampitso ho tsianjery taty aoriana ary ampiasaina amin’ny fitaovana rehetra.
Noho izany, ny sehatra fanabeazana iraisam-pirenena dia afaka manitsy amin’ny fehezan-dalàna rehetra ary manana fahafahana hanampy olona marobe manerana izao tontolo izao.
Ny fomba tsara indrindra hianarana ny fiteny dia ny hanoratana tanteraka amin’ny tontolo iainana, ka mikasa ny hamolavola fitaovana hikaroka trano any amin’ny firenena manana fahafahana hifandray amin’ny mpiara-miombon’antoka, ary koa ny fahafahana mahita kilasy amin’ny sekoly fiteny sy ny planeta mandeha.
Amin’ny fijery voalohany dia toa tsy dia misy loatra ny hevitsika ho an’ny maro, saingy amin’ny fampiharana marina sy ny tatitra momba ny vaovao ho an’ny olona marobe manerana izao tontolo izao dia miharihary fa hiasa izany.
Raha manana hevitra mahaliana momba ny fampivelarana ny sehatra izahay na te-handray anjara amin’ny tetikasanay – manorata aminay amin’ny fotoana rehetra.